LEGO® Juniors Create & Cruise 6.8.6085 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.8.6085 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ပညာေရးဆိုင္ရာ LEGO® Juniors Create & Cruise
LEGO® Juniors Create & Cruise ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
LEGO® Junior ခုနှစ်တွင် Create & Cruise နဲ့, ယောက်ျားလေးနှင့်မိန်းကလေးဟာသူတို့ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင် Lego minifigures နှင့်ကားများ, ရဟတ်ယာဉ်များနှင့်ကုန်တင်ကားများကဲ့သို့ပျော်စရာမော်တော်ယာဉ်များကိုဖန်တီးရန်၎င်းတို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုသုံးနိုင်သည်။
ဒင်္ဂါးပြားစုဆောင်းအနည်းငယ်လွယ်ကူသောထိအတူတညျဆောကျနိုငျသောဂိမ်းထဲမှာ Lego အစုံသော့ဖွင့်ပါလိမ့်မယ် - နှင့်သင့်ကလေး၏လာမယ့် drive ကို-မှတဆင့်များအတွက်ဂိမ်းရဲ့အရောင်စုံ 3D ရှုခင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အသစ်သောအရာတစ်ခုခုတည်ဆောက်ရန်သင့် Lego အုတ်ရောထွေးနှင့်ကိုက်ညီဖို့ဘယ်လိုတူ, သို့မဟုတ်သင့်ဖန်တီးမှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့ဘယ်လို - Create & Cruise နဲ့အစစ်အမှန်ဘဝ Lego အဘို့အလှုံ့ဆော်မှုများများထောက်ပံ့သင်နှင့်သင့်ဆိအိမ်မှာထွက်ပွနျလညျသရုပျနိုငျသောကးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ပြဇာတ်။ တစ်ဦးနင်ဂျာ, မင်းသမီး, ရဲအရာရှိအများအပြားပိုပြီးကဲ့သို့ပျော်စရာဇာတ်ကောင် Play!
* အဘယ်သူမျှမအတွက်-app purchase
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ရှုခင်းနှင့်အတူ * အသစ်အဆင့်ဆင့်
* NEW မော်ဒယ်များ - ပျော်စရာသစ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကစားအတွေ့အကြုံများဆိုလိုသည်။ အခုဆိုရင်သင့်ကလေးရဟတ်ယာဉ်များနှင့်ကြီးမားသောကုန်တင်ကားနှင့်အတူဆော့ကစားနိုငျပါသညျ!
* Minifigure selector နှင့်ဖန်တီးမှုယာဉ်များအများကြီးရောနှောဖို့နှင့်ပွဲစဉ် - ပိုငျသညျ play, ပိုငျသညျသော့ဖွင့်!
* တောက်ပ, ပျော်စရာနဲ့ဖော်ရွေ Animation နဲ့တေးသံ
လွယ်ကူသောဂိမ်းများအတွက် * အလိုလို icon များနှင့်အညွှန်း - အဘယ်သူမျှမစာဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်
LEGO®အုတ်နှင့်အတူ * ကို Virtual အဆောက်အ
* အဘယ်သူမျှမ Third-party ကြော်ငြာ
ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ * အဘယ်သူမျှမလင့်များ
LEGO® Junior အကြောင်း:
LEGO® Junior မော်ဒယ်များ Build မှအထင်ကရ, ပျော်စရာနဲ့လွယ်ကူမှတဆင့်ကလေးများ Lego အုတ်နဲ့ကြီးမြတ်ပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံကအသက်အရွယ် 4-7 ပေးရဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Lego Junior အစုံအမြန်စတင်ဒြပ်စင်များနှင့်အမေသို့မဟုတ်အဖေထံမှအကူအညီမပါဘဲတည်ဆောက်ထားနိုင်ရေတွက် Pre-ထုပ်ပိုးအိတ်ဆံ့ - ဆိုသေးငယ်ဆောက်အပိုဂုဏ်ယူစေသည်ရာ။
လုပ် FUN ယူ
LEGO® Junior Create & Cruise နဲ့ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများများအတွက်အခမဲ့သင်ယူမှုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ, သင့်အခန်းကဏ္ဍကိုရွေးချယ်သင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုတည်းဖြတ်ပြီးပျော်စရာနှင့်ဖော်ရွေပတ်ဝန်းကျင်မှတစ်ဆင့်မောင်းတယ်။ ဒီဂိမ်းကသင့်ဆိလေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပညာရေး apps များထဲကတစ်ခုရှိသူ၏စိတ်နှင့်မော်တော်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်တဲ့ပျော်စရာပညာရေးဆိုင်ရာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက်ဒီဦးနှောက်ဂိမ်းသင့်ရဲ့မိန်းကလေးသို့မဟုတ်ယောက်ျားလေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတို့ကကစားရန်ပင်ပျော်စရာပါပဲ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဖန်တီးမှုဆိသည်သူ၏ Lego ဇာတ်ကောင်တည်းဖြတ်နှငျ့ပတျဝနျးကငျြတစျဆငျ့ဒီလိုမြင်ကွင်းစဉ်တစ်ခုမူရင်းလမ်းထဲမှာ customize ခွင့်ပြုတဲ့ "ကစားဟန်ဆောင်" အင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်။
LEGO® Junior Create & Cruise နဲ့ Google ရဲ့အတွင်းရေပန်းစား apps များနှင့်ဂိမ်းများများထဲမှ Play ဖြစ်ပါတယ်။ ထက်ပိုမို 50+ သန်း downloads, ထားရှိခြင်းကဒီ 2017 ခုနှစ်ကလေးတွေကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နှင့်မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်းတွေထဲကစဉ်းစားနိုင်အတည်ပြု။
သင့်ရဲ့ဆိတ်သငယ် 2016 ခုနှစ်တွင် Lego အားဖြင့်ကလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာကအကောင်းဆုံးဂိမ်းကစားခြင်းအားဖြင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နားလည်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် 2017 တီထွင်ဖန်တီးနှင့်ကစားဒီဂိမ်းရဲ့နောက်ကွယ်ကအဓိကတန်ဖိုးများဖြစ်ကြပြီးကလေးတွေသင်ယူနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာကစားနားလည်ရန်အဘို့ကြီးစွာသောအတွေ့အကြုံကိုကူညီပါ။
NO in-app purchases နှင့်မ in-app ကြော်ငြာခြင်း & GAME နဲ့အတူ GAME
သင်သည်သင်၏ဆိလုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်ကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်သေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းကိုမဆို In-ဂိမ်းကြော်ငြာနှင့်မိဘ app ကိုသူတို့ရဲ့ကလေးတွေအတွက်လုံခြုံဒစ်ဂျစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်သုံးသပျနိုငျမပါဝင်ပါဘူး။ ထို့အပွငျလေးတွေ app ကိုအထဲမှာဘာမှမယ်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးကို 100% လုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်၌မိမိတို့ဦးနှောက်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှု play နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သူတို့ကိုကူညီပေးသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအဓိကအားမူကြိုကျောင်းသားများများအတွက်ပညာရေးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
app ကိုထောက်ခံမှုအဆက်အသွယ် Lego စားသုံးသူဝန်ဆောင်မှုသည်။
အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကို http://service.lego.com/contactus ရည်ညွှန်းများအတွက်
သငျသညျဒီ app ကို download လုပ်ပါလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒနှင့် app များကိုများအတွက်အသုံးပြုမှုစည်းကမ်းချက်များကိုလက်ခံခဲ့ကြသည်။
http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy အပေါ်ဆက်ဖတ်ရန်နှင့် http://aboutus.lego.com/en-us/legal-notice/terms-of-use-for-apps
Lego နှင့် Lego လိုဂိုအဆိုပါ Lego Group ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ © 2017 အဆိုပါ Lego Group မှ။
LEGO® Juniors Create & Cruise အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
LEGO® Juniors Create & Cruise အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
LEGO® Juniors Create & Cruise အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
LEGO® Juniors Create & Cruise အား အခ်က္ျပပါ
thisisastoreguys စတိုး 15 15.13k
LEGO® Juniors Create & Cruise ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း LEGO® Juniors Create & Cruise အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 6.8.6085
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://aboutus.lego.com/legal-notice/Privacy-Policy
App Name: LEGO® Juniors Create & Cruise
Release date: 2019-09-17 20:16:29
လက်မှတ် SHA1: 65:BF:86:27:50:15:A1:5E:AA:72:BC:82:8C:CD:38:7A:12:14:13:F0
ထုတ်လုပ်သူ (CN): LEGOSystemAS
LEGO® Juniors Create & Cruise APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ